Soo dejisan FBReader 2.5.7 – Android – Vessoft
Soo dejisan FBReader
FBReader – software inay u akhriyaan buugaagta elektarooniga ah qaabab kala duwan. FBReader kuu ogolaanaya in aad ka raadin iyo soo bixi buugaag ku qoran luqado kala duwan oo ka maktabadaha network ama dukaamada. Software ayaa si toos ah u abuuraa content buugga ee, waxay qabanqaabisaa hyphenation iyo memorizes booska hadda qoraalka ka dib markii xiritaanka ee buugga. FBReader u saamaxaaya in ay kala soocaan buugaagta ee ay maktabadda u gaar ah qoraaga, sifayn ama taxanaha. Sidoo kale software ka taageertaa .Wadashaqayntaas ururinta buugaagta la qalab kale. FBReader waxaa ku jira tiro badan oo ah qalab reserved goobaha software ee baahida user.
Taageertaa qaabab kala duwan
Galitaanka ee files ka archives ah
Downloads buugaagta maktabadaha network iyo dukaamada
Control of ururinta buugaagta
FBReader Software la xiriira:
English, Deutsch, 中文, Русский... Periscope 1.3.4
English, Українська, Español, Português... BBC News 3.7.1.9